हिमाल खबरपत्रिका | हलेसीका पुजारीलाई कुशबिर्ता
हलेसीका पुजारीलाई कुशबिर्ता
सेन राजाले हलेसीका गिरी गोसाईं पुजारीलाई स्याहामोहर लेखिदिएको साढे तीन सय वर्ष पुग्न लागेको छ।
हलेसी महादेवस्थान, खोटाङ ।
मुनिमुकुन्द सेनले आर्जेको राज्य छोरानातिमा भागबण्डा हुँदा कान्छा छोरा लोहाङ्ग सेनको नेतृत्वमा जितेको नारायणी पूर्व सुखिम सीमासम्मको ठूलो भूभागको राजधानी मकवानपुर नै रह्यो । लोहाङ्ग सेनका नाति हरिहर सेन हिन्दूपति कहलिएर शासन गर्दथे । हरिहरका छोरा शुभ सेन हुन् ।
शुभ सेनका जेठा छोरा महीपति सेन र कान्छा मणिक सेन भए (गताङ्कको हिमाल मा लेख्ता यी दुई भाइमा जेठो कान्छोमा व्यत्यय परेको छ) । महीपति कमलापूर्वको सबै भाग स्वतन्त्र पारी विजयपुर राजधानीमा बसी शासन गर्न लागे । कान्छा मणिक सेन कमलापश्चिमको मकवानपुर राज्यमा सीमित भए ।
मणिक सेनका छोरा हेमकर्ण सेनकी छोरी पृथ्वीनारायण शाहलाई दिइएको थियो । तर, छोरी गरीब राजघरानामा परी भनी हेमकर्णले मैतालु पठाएका थिएनन् । मैतालु लिन आउँदा जेठान दिग्वर्धन सेनसँग पृथ्वीनारायणको खडाजङ्गी परेको थियो । गताङ्कमा महीपति सेनले तुलादानमा नारायण कोइरालालाई दिएको वितलप र बेपत्ता भएका œयम्वक तिमसिनाको बिर्ता स्याहामोहरको विवरण दिइसकेको छु । त्यसभन्दा पहिले शुभ सेनले हलेसीका पुजारी यज्ञ गिरी गोसाईं र पूर्ण गिरी गोसाईं शैव सन्न्यासीलाई सं. १७३१ मा दिएको बिर्ता जग्गाको स्याहामोहर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
त्यसवेला शुभ सेनको मुकाम फालिकोट थियो । फालिकोट भोजपुरको दिङ्गला पश्चिम र सदरमुकाम भोजपुर पूर्व अरुण नदी छेउमा पर्छ । राजा बस्ने त्यो किल्ला ठूलो हुँदो हो । शुभ सेन देश भ्रमण गर्दै शासन व्यवस्था मिलाउँदै जाने सिलसिलामा त्यतिपर पुगेका हुनन् । उनले माझ्किरातको पूर्वी किल्लाबाट पश्चिमान्तको खार्पा बिर्ता दिएको देखिन्छ ।
हलेसीका पुजारी सन्न्यासीले रावाखोला पश्चिमको पाखो खार्पा बिर्ता घडेरी पाएका छन्, खर्कको नाम छैन । सिमले, बालुवा र ज्यामिरे खेत दिइएको छ । बालुवा खेत चाहिं रामसिंह कार्कीको खायल मध्येको हो भनिए पनि अरूकै लिएर दिएको बुझ्न्छि ।
त्यतिवेला शुभ सेनका छोराहरूले छुट्टी भिन्न राज्य बनाइसकेका थिएनन् । त्यसो हुँदा शुभ सेनको राजधानी मकवानपुरमै थियो । त्यहींबाट राजासँगै गएका दलखम्ब बानियाँ र हंसध्वज कार्की प्रवानगी (सन्न्यासीका बिर्ताको प्रमाङ्गी गराउने) अधिकारी रहेका छन् ।
पछि पोख्रेलहरू बसेको खार्पा घडेरी प्रसिद्ध स्थान भयो । हेर्दा यो भिरालो पाखो छ । चैत–वैशाखमा काला पाप्रे ढुङ्ग्यान भएका स–साना पाटा बारी उराठलाग्दो देखिन्छन् । खार्पा–मांखा–चार्खुका पोखे्रलहरूको रइस चाला रावाखोला किनारको खेतको धान, ऐंसेलुखर्कको गोरस र मधेशको बिर्ताको जिमिदारीले जमेको थियो । खार्पाको प्रसङ्ग मैले सानैमा आमैले आफ्ना माइतीको वर्णन गर्दा सुनेको थिएँ ।
यो गिरी पुजारीको गूठबिर्ता कसरी पोखे्रलकोमा पुग्यो ? यसबारे आगामी अंकमा पछि छलफल गरिनेछ । सन्न्यासीहरूलाई पायक पर्ने यो बिर्ता रैकर भई चौतरिया राईका मातहतमा रहेको कुरा उनै राईलाई राजाले लेखेको चिठीबाट बुझ्न्छि । खार्पा बिर्ता पाउने हलेसीका पुजारी यज्ञ गिरी र पुरन (पूर्ण) गिरी गृहस्थ सन्न्यासी थिएनन्, त्यसैले गोसाईं भनियो । पछि चाहिं गृहस्थीमा परिणत भएको बुझ्न्छि । अघि भोजपुरको आहालेमा पनि गिरी, पुरी, भारती सन्न्यासीहरू थिए । पछि उनीहरू सबै गृहस्थ बनेर चतरा गुठीको जग्गा आवाद गरेका हुन् ।
चतराका महन्तको अधीनमा अलवल्य धनसम्पत्ति र गुठी जग्गा थियो । सेन राजाका एक राजकुमारले शिखासूत्र त्यागी सन्न्यास लिएर आफ्ना अधीनको बाह्र हजार बिघा जमीन चतरामठमा अर्पण गरेको अनुश्रुति छ । बराहक्षेत्रका पुजारी चतराकै महन्तले नियुक्त गर्थे, पूजा खर्च चतराबाटै आउँथ्यो । पिण्डेश्वरमा चतरा गुठीबाटै पूजा चल्थ्यो । पछि चतराकै आम्दानीबाट पिण्डेश्वर महाविद्यालय स्थापित भएको कुरा पहिले पनि उल्लेख गरिएको हो । त्रिवेणीमाथिको विकट डाँडामा रहेको मैना स्थानको पूजा पनि चतरा गुठीबाटै सञ्चालित छ ।
शिवको दैनिक पूजा गर्ने प्राचीनकालदेखि नै सन्न्यासी हुन्थे । भारतवर्षभरिका ज्योतिर्लिङ्गमध्ये सर्वश्रेष्ठ पशुपतिदेवको ज्योतिर्लिङ्ग शिर मानिन्छ । सबै ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन गरेपछि पशुपतिको दर्शन नगरिकन फल पाइँदैन, तीर्थयात्रा पूर्ण हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।
लिच्छविकालमा पशुपतिका पुजारी प्रणद्र्द प्राणकौशिक थिए । वर्णाश्रमबाट सन्न्यास धर्म लिएका हुँदा उनी पशुपतिका महन्त स्वामी पुजारी भए । पछि पनि सन्न्यासी नै पुजारी भए । पशुपतिको आगम घरमा रहेका दक्षिणी भट्टले स्वामीलाई दीक्षा मन्त्र सुनाउने, पूजाविधि सिकाउने गर्थे । पछि मल्ल राजासँग मनमुटाव बढेर दण्डी स्वामी राघवानन्द सन्न्यासी पूजा छोडेर हिंडेपछि उपान्त्य मल्ल राजाले दक्षिणी गृहस्थी भट्ट ल्याएर पूजा गर्न थालियो, आजसम्म यही चलिरहेको छ ।
चतरा मठका महन्तले आफ्नो गूठजग्गाको लहनतहन मिलाउन आफ्नै चेलाचपेटा पठाएका हुनन् । पछि तिनै गृहस्थमा परिणत भएजस्तै हलेसी महादेवका पुजारी पनि पहिले सन्न्यासी नै थिए हुनन् । पछि ती सबै गृहस्थ भए पनि सन्न्यस्त हुदाको गिरी, पुरी, भारती आदि पुरानो उपाधिलाई थरको रूपमा लिन छाडेनन् ।
शुभ सेनले गिरी गोसाईंहरूलाई गरिदिएको स्याहामोहर
स्वस्ति श्रीरुपनारायणेत्यादि–विविधविरुदावलीविराजमान–मानोन्नत–महाराजाधिराज–श्रीहिन्दुपति–माहाराजकुमार– श्रीश्रीशुभसेनदेवानाम्सदासमरविजयिनाम्..............
आगे यज्ञगिरि गोसाईं पुरनगिरि गोसाईं कुशवीर्ता दिहल रावामध्ये खेत ३ ताके तपसिल– सिमल्याखेत १औं रामसिंह कार्कीक खायलमध्ये बालुवा खेत १ औ ज्यामिरिया खेत १ असकै खेत लिनी कुस बिर्ता दीहल आपना वही अम्बल करथु विर्तीयाक सरहसै खिजमति करैके औ रावा मध्ये घराडी खार्पा दीहल. इति सम्वत् १७३१ साल भदौ वदि ११ मोकां फालिकोट
प्रर्वानगी दलखम्ब बानिया हंसध्वज कार्कि